Dhagayso :-Hay,ada Taya dhawrka Puntland Oo Bosaaso Shahaadooyin Aqoonsi ku Gudoonsiisay labo kamid ah Warshadaha biyaha sifeeya | puntlandi.com
Dhagayso :-Hay,ada Taya dhawrka Puntland Oo Bosaaso Shahaadooyin Aqoonsi ku Gudoonsiisay labo kamid ah Warshadaha biyaha sifeeya
Gudiga Taya dhawrka Badeecadaha Puntland oo kaashanaya Hay,ada Taya dhawrka Puntalnd ayaa maanta Magaalada Bosaaso waxa ay Shahaadooyin Aqoonsi ku Gudoonsiiyeen labo kamid ah Shirakadaha Biyaha macaan sifeeya ee ka howlgala Magaalada Bosaaso ,kadib markii la ogaaday tayada biyaha ay soo soaaraan in ay tahay mid waafaday baaritaankii lagu sameeyay .
Munaasibada oo lagu qabtay Xarunta Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay Maamulka Gobolka bari, kan dagmada Bosaaso , Madaxda Haya,ada Taya dhawrka Puntland Mas,uliyiinka Gudiga Taya dhawrka Puntland .
Salaad Aadan Maxamuud oo ah Agaasimaha Taya dhawrka badeecadaha Puntland ,ahna Gudoomiyaha Gudiga Taya dhawrka oo furitaankii munaasibada ka hadlay ayaa sheegay in Gudiga ay horay sha haado sharaf u Gudoonsiiyeen labo Warshadood oo horay u buuxiyay shuruudihii looga baahnaa .
Muxidiin Maxamed oo kasocday Aqua Safi iyo Cabdirisaaq Cabdulle oo ka socday Al-Raxma ayaa ka mahadceliyay shahaadooyinkan loo gartay, waxaana uu xusay inay sii wadayaan hormarinta biyaha.
Gudiga Taya dhawrka Puntland ayaa sheegay in Warashadaha kale ee harsan uu ku socdo baaritaan lagu ogaanayo Tayada Biyaha ay soo saaraan .
Bishii Aug- 2017 kii ayay ahayd markii uu Madaxweyne Gaas Magaalada Bosaaso uu ka daah furay Xarunta Taya Dhawrka Badeecadaha ee Puntland .